I-Arduino Oplà IoT Kit yokuthuthukiswa kwe-Intanethi Yezinto | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
I-Arduino Oplà IoT Kit: ikhithi entsha yokuthuthukisa i-Intanethi Yezinto
I-Arduino inenani elikhulu le- izingxenye ezihambisanayo, kanye namakhithi wokuthuthuka nakho konke okudingayo ukuze uqalise noma ngamaphrojekthi we-DIY athuthukile ngandlela thile. Kepha kusukela manje, abenzi nabo banakho ikhithi entsha ehlose ukuthuthukisa amaphrojekthi we-IoT. Ngale ndlela uzoba nakho konke okudingayo ukuqala emhlabeni we-Intanethi Yezinto.
I-Akhawunti nge irekhodi elihle lezinto lokho kuzokuthakazelisa, futhi okusebenza kakhulu kuzo zonke lezo zinhlelo zokusebenza ezixhunyiwe nekhaya elihlakaniphile ...
1 Konke odinga ukukwazi mayelana nekhithi ye-Arduino Oplà
1.1 Izingxenye Kit
Konke odinga ukukwazi mayelana nekhithi ye-Arduino Oplà
Le phrojekthi entsha ye-Intanethi Yezinto, noma i-IoT, yinto entsha ye-Arduino. Ikhithi esemthethweni ekhishwe ngaphansi kwegama I-Arduino Oplà IoT Kit nangesethi yezingcezu ezokuvumela ukuthi wakhe izinhlelo zokusebenza ezifika kwezingu-8 kule nkambu, ngezifundo ezinemininingwane yokuthi uqale ukudala nokuthi ungathola kusuka ku iwebhusayithi esemthethweni kusuka ku-Arduino.
Amaphrojekthi yini ongayakha Kuphela ngale khithi zisukela kokulawula okukude okulula kwamalambu ekhaya, kuya ekuphathweni okukhaliphile kohlelo lonke lokunisela lwensimu, kudlule kwabanye njengokwenza uhlu lwezimpahla nokulawula ezinye izinhlelo ezihlakaniphile, ezokuphepha, njll.
El Intengo yi- $ 99 futhi isivele itholakala kusuka ku- Iwebhusayithi esemthethweni ye-Arduino, okwamanje ngeke itholakale kwenye indawo. Ukushintshanisa leli xabiso uzothola, ngaphezu kwekithi uqobo, futhi nokubhaliselwa kwezinyanga eziyi-12 ku-Arduino Dala Umenzi Wokuhlela. Lokho kunikeza ukufinyelela kwi-Arduino IoT Cloud, evumela abasebenzisi ukuthi bagcine imidwebo efwini, bandise inani lezici, futhi bathole ukusekelwa kwamabhodi wezinkampani zangaphandle namadivayisi we-LoRa, kanye nokwakhiwa okungenamkhawulo.
Ngemuva kwezinyanga eziyi-12, abasebenzisi abasenentshisekelo yokuqhubeka nezinsizakalo, kuzofanele bavuselele i- okubhaliselwe i- $ 5.99 ngenyanga (Uma ungayenzi ingasebenzi, bazokukhokhisa ngokuzenzakalela).
Kepha izingxenye ze-Arduino Oplà IoT Kit, unezinto ezilandelayo:
Isisekelo esikhulu esinombala we-LCD wesikrini, izinhlobo ezahlukahlukene zezinzwa, isilawuli esinamandla, ama-RGB ama-LED, nezinye izingxenye nezixhumi
Kubandakanya nebhodi le-WiFi ukwengeza ukuxhumana okungenantambo kumaphrojekthi wakho.
Izinzwa eziningi, izintambo zepulasitiki, nezintambo ze-PnP (Plug & Play). Konke ukuze amaphrojekthi ahlangane kalula ngaphandle kokuhlanganisa noma yini.
para ulwazi oluthe xaxa, ungabona le vidiyo:
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » I-Arduino » I-Arduino Oplà IoT Kit: ikhithi entsha yokuthuthukisa i-Intanethi Yezinto
Inzwa ye-PIR: konke odinga ukukwazi